Ndị Izrel fere nwa ehi ọlaedo (1-35)
Mosis nụrụ ụda abụ ndị Izrel (17, 18)
Mosis kụriri mbadamba nkume ndị e dere iwu (19)
Ụmụ Livaị rubeere Jehova isi (26-29)
32 N’ime oge a, ndị Izrel hụrụ na Mosis anọteela aka n’ugwu ahụ, ọ gbadatabeghịkwa.+ Ha wee zukọta n’ebe Erọn nọ, sị ya: “Meere anyị chi ga na-edu anyị,+ n’ihi na anyị amaghị ihe mere Mosis a, onye si n’Ijipt dupụta anyị.” 2 Erọn wee sị ha: “Gbapụtanụ ọla ntị ọlaedo+ ndị nwunye unu gba nakwa nke ụmụ unu ndị nwoke na ụmụ unu ndị nwaanyị gba ma chịtaranụ m ha.” 3 Ha niile wee malite ịgbapụta ọla ntị ọlaedo ndị ha gba ma na-achịtara ha Erọn. 4 O wee nara ha ọlaedo ndị ahụ ha chịtara ma jiri ihe e ji atụ́ ihe rụọ ya, mepụta nwa ehi.*+ Ha malitere ịsị: “Ndị Izrel, ihe a bụ Chi anyị, onye dupụtara anyị n’Ijipt.”+ 5 Mgbe Erọn hụrụ ihe a, ọ rụrụ ebe ịchụàjà n’ihu ya. Erọn wee kwuo n’olu dara ụda, sị: “E nwere ememme a ga-emere Jehova echi.” 6 N’echi ya, ha biliri n’isi ụtụtụ ma bido ịchụ àjà a na-esu ọkụ na àjà udo. Mgbe e mechara, ndị Izrel nọdụrụ ala riwe ihe ma ṅụwa mmanya. Ha biliziri kporiwe ndụ.+ 7 Jehova gwaziri Mosis, sị: “Gbadaa, n’ihi na ndị gị, bụ́ ndị i dupụtara n’Ijipt, emerụọla onwe ha.+ 8 N’egbughị oge, ha ahapụla iwu m nyere ha ka ha na-edebe.+ Ha emeerela onwe ha nwa ehi,* ha na-akpọkwara ya isiala ma na-achụrụ ya àjà, na-asị, ‘Ndị Izrel, ihe a bụ Chi anyị, onye dupụtara anyị n’Ijipt.’” 9 Jehova wee gwa Mosis, sị: “Ahụla m na ndị a bụ ndị isi ike.*+ 10 Hapụ m ka m jiri oké iwe na-ewe m bibie ha, ka m mezie ka ị bụrụ mba dị ukwuu.”+ 11 Mosis wee rịọ Jehova bụ́ Chineke ya arịrịọ,*+ sị: “Jehova, gịnị mere i ji ewesa ndị gị oké iwe, bụ́ ndị i ji ike gị dị ukwuu na aka gị dị ike kpọpụta n’Ijipt?+ 12 Gịnị mere ị ga-eji kwe ka ndị Ijipt sị, ‘O bu ihe ọjọọ n’obi kpọpụta ha maka na ọ chọrọ igbu ha n’ugwu ma kpochapụ ha n’ụwa’?+ Ka iwe gị dị ọkụ dajụọ. Biko, gbanwee obi gị* banyere ọdachi a i kpebiri na ị ga-eme ka ọ dakwasị ndị gị. 13 Cheta Ebreham, Aịzik, na Izrel bụ́ ndị ohu gị, ndị i ji onwe gị ṅụọrọ iyi, sị: ‘M ga-eme ka ụmụ* unu dị ọtụtụ ka kpakpando ndị dị n’eluigwe.+ M ga-enyekwa ụmụ* unu ala a niile m doweere ha, ka ha wee nweta ya ka ọ bụrụ nke ha mgbe niile.’”+ 14 Jehova wee malite ịgbanwe obi ya* banyere ọdachi ahụ o kwuru na ọ ga-ewetara ndị ya.+ 15 Mosis tụgharịrị si n’ugwu ahụ gbadaa, o bukwa mbadamba nkume abụọ e dere Ihe Àmà ahụ+ n’aka ya.+ E dere ihe ná mbadamba nkume ndị ahụ n’ihu ya abụọ. E dere ya ma n’ihu ma n’azụ. 16 Ọ bụ Chineke mere mbadamba nkume ndị ahụ. Ọ bụkwa Chineke dere ihe ná mbadamba nkume ndị ahụ, ya bụ, ihe ndị e denyere na ha.+ 17 Mgbe Joshụa nụwara mkpọtụ ndị Izrel n’ihi mkpu ha na-eti, ọ sịrị Mosis: “Mkpu agha na-ada n’ebe anyị mara ụlọikwuu.” 18 Ma Mosis sịrị: “Ọ naghị ada ka abụ ndị meriri emeri. Ọ naghịkwa ada ka mkpu ákwá ndị e meriri emeri. Ihe m na-anụ bụ ụdị abụ ọzọ.” 19 Ozugbo Mosis rutere nso n’ebe ha mara ụlọikwuu ma hụ nwa ehi+ ahụ na egwú ha na-agba, ezigbo iwe malitere iwe ya. O wee tụpụ mbadamba nkume ndị ahụ o bu n’aka ma kụrisịa ha n’ala ala ugwu ahụ.+ 20 O buuru nwa ehi ahụ ha mere, kpọọ ya ọkụ ma gwerie ya, ya adị ka ntụ.+ O fesasịkwara ya n’elu mmiri ma mee ka ndị Izrel ṅụọ ya.+ 21 Mosis jụrụ Erọn, sị: “Gịnị ka ndị a mere gị i ji mee ka ha mee mmehie ọjọọ a?” 22 Erọn zara, sị: “Onyenwe m, iwe gị adịla ọkụ. Ị ma nke ọma na ndị a na-achọkarị ime ihe ọjọọ.+ 23 Ha sịrị m, ‘Meere anyị chi ga na-edu anyị, n’ihi na anyị amaghị ihe mere Mosis a, onye si n’Ijipt dupụta anyị.’+ 24 N’ihi ya, m sịrị ha, ‘Ka onye ọ bụla nke nwere ọlaedo gbapụta ya ma nye m ya.’ M wee tụba ya n’ọkụ, nwa ehi a apụta.” 25 Mosis hụrụ na ndị Izrel ekweghị nchịkwa maka na Erọn hapụrụ ha ka ha na-eme otú masịrị ha. Ha wee menye onwe ha ihere n’ihu ndị iro ha. 26 Mosis wee guzoro n’ọnụ ụzọ ámá ebe ha mara ụlọikwuu, sị: “Ònye dịnyeere Jehova? Ya bịakwute m.”+ Ụmụ Livaị niile wee malite ịgbakọta n’ebe ọ nọ. 27 Ọ sịziri ha: “Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, sị, ‘Ka onye ọ bụla n’ime unu kee mma agha ya n’úkwù. Gagharịakwanụ n’ebe niile unu mara ụlọikwuu, si n’otu ọnụ ụzọ ámá ruo n’ọnụ ụzọ ámá ọzọ. Gbuonụ ụmụnne unu, ndị agbata obi unu, na ezigbo ndị enyi unu.’”+ 28 Ụmụ Livaị mere ihe Mosis kwuru. E wee gbuo ihe dị ka puku ụmụ nwoke ndị Izrel atọ (3,000) n’ụbọchị ahụ. 29 Mosis kwuziri, sị: “Wepụtanụ onwe unu iche taa ijere Jehova ozi, n’ihi na onye ọ bụla n’ime unu egbuola nwa ya nakwa nwanne ya.+ Ọ ga-agọzi unu taa.”+ 30 N’echi ya, Mosis gwara ndị Izrel, sị: “Unu emeela mmehie dị oké njọ. Ma, m ga-agbago n’ugwu gakwuru Jehova ka m mara ma è nwere ihe m ga-eme ka ọ gbaghara unu mmehie unu.”+ 31 Mosis wee laghachikwuru Jehova, sị: “Ndị a emeela nnukwu mmehie. Ha meere onwe ha chi ọlaedo.+ 32 Ma ugbu a, ọ bụrụ na ị chọrọ, gbaghara ha mmehie ha.+ Ma ọ bụrụ na ị gaghị agbaghara ha, biko, hichapụ aha m n’aha ndị i dere n’akwụkwọ gị.”+ 33 Ma Jehova sịrị Mosis: “Ọ bụ onye ọ bụla mehiere m ka m ga-ehichapụ aha ya n’akwụkwọ m. 34 Gaa duru ndị a gawa n’ebe m gwara gị. Lee, mmụọ ozi m ga-ebutere gị ụzọ.+ M ga-atakwa ha ahụhụ maka mmehie ha n’ụbọchị m ga-eme ka ha zaa ajụjụ maka ya.” 35 Jehova wee malite ịta ha ahụhụ n’ihi nwa ehi ahụ ha mere, nke Erọn mere.
^ Ma ọ bụ “nwa ehi a kpụrụ akpụ.”
^ Ma ọ bụ “mee ka obi Chineke jụrụ.”
^ Ma ọ bụ “nwee mwute.”
^ Ma ọ bụ “inwe mwute.”